Sababaha ugu badan ee gadhka loo xidho, faa'iidooyinka | Ragga Stylish
Maxay yihiin sababaha aad u xiraneyso garka?
In kastoo moodooyinku yimaadaan oo baxaan Garka xirashada waa isbeddel weligiis soconaya. Xitaa xagaaga, marka heerkulkiisu sarreeyo rabitaanka, mararka qaar aan la xakamayn karin, si daloolada wajiga looga dhidido ...
Si kastaba ha noqotee, xirashada gadhka waa arrin ka baxsan xilliga, xagaaga ama jiilaalka. Waa qaab nololeed. Waa dariiq loo noqdo.
Sababaha loo xiro gadhka
Sawir adag oo xoog leh. Heer aan miyir qabnay ayaan horey u ogaanay, hase yeeshe, waxaa jiray daraasado dhowr ah oo xaqiijiyay taas: ragga garka xiranaya waxay bixiyaan muuqaal xoog badan oo awood leh, asxaabtayada hortooda iyo gabdhaha hortooda.
Arrin jirdhis. Ragga gadhka leh way fududahay, kamay istaagaan wax caqabad ah waxayna kalsooni buuxda ku qabaan kartidooda iyo kartidooda.
Xaga bulshada. Ragga gadhka leh waxaa aaminsan qayb wanaagsan oo dadka ka mid ah, sida dadka maqaam sare ku leh bulshada, lehna awood iyo lacag badan.
Sababta oo ah waxay jecel yihiin: Hore ayaan u soo sheegnay qodobkaan horay, laakiin waa lagama maarmaan in dib loogu noqdo. Gabdhaha badankood way gartaan xoog iyo nabadgelyo Knight kuwa garka xiro.
Milicsiga Bisaylka: iyadoo aan loo eegin da'da, marka nin go'aansado inuu koro gadhka, waa sababta oo ah waqtiyada caruurnimadu way inaga dambeeyaan. Tan macnaheedu maahan inaan madadaalineyno. Hal shay shaqo kuma laha tan kale.
Si loo muujiyo inaan leenahay caafimaad adag. Garka buuxa waa milicsiga kaliya kalsoonida iyo isku kalsoonida, sidoo kale waa isku mid habdhiska difaaca jirka oo xoog leh iyo jidh caafimaad qaba. Intaas waxaa sii dheer, waxay tilmaan u tahay bacriminta.
Sababtoo ah xiirista maalin kasta waa bummer. Ma noqon karto sabab kiisaska oo dhan. Laakiin shaqaale badan oo ay tahay inay goor hore shaqeeyaan, tixgeli taas waqtiga tan iyo inta ay ka soo kacayaan sariirta oo ay ordayaan ma aha xiirashada.
Ilaha sawirka: Mawduuca / Upsocl
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Maxay yihiin sababaha aad u xiraneyso garka?
Hagaag, kiiskeygu wuxuu umuuqdaa mid geeri ah, marka ma jirto waddo aan uga tago
Louis Vuitton waxaa lagu dhiirrigeliyay iyada oo loo adeegsanayo habeynta guga / xagaaga 2018